रमाइलो चुट्किलाः ‘डार्लिङ अबचाहिँ दुःख नदेउ है’ – Nepal News
रमाइलो चुट्किलाः ‘डार्लिङ अबचाहिँ दुःख नदेउ है’
अहिले एकैछिन अगाडी मेरो मोबाइलमा एसएमएसको रिङ बज्यो । हेर्छु, डार्लिङको एसएमएस छ । ए बा ! हिजोमात्रै नगद टक्राएको आजै कसरी डार्लिङले सम्झिन् ? कति चाहिने यिनलाई पैसा पनि ? म छक्क परे । यी डार्लिङ पनि बेला न कुबेला दुख दिन्छिन् । कति एसएमएस पठाइरहेको होला ! मैले कहिले कप्ट्याँई गरेको छैन । भनेको बेला धन र मन दिएकै छु तर पनि बेला बेलाको यो किचकिच ? दिक्क लागेर आयो । बेकार मोबाईल बोकेछु जस्तो पनि लाग्यो । मोबाइल बिना पनि त जिन्दगी चलेकै थियो । यी डार्लिङ पनि थिइनन्, किचकिच पनि थिएन । कति ढुक्कको थियो जिन्दगी । नदुखेको टाउको डोरी लाएर दुखाएछु ।
मनमनै फत्फताइ रहे । रुष्ट मन भएपनि ध्यान दिएर हेरे । डार्लिङ भनेको एनटिसीको क्या । डार्लिङले एसएमएसमा त अर्के खबर पो बोकेकी रहिछन्, ‘९७७९८४’ बाट तपाईकोमा रु १०० ट्रान्सफर गरिएको छ । कृपया सुनिश्चित गर्नुहोस्’ पो भनेको रहेछ । साँच्चैको छक्क त अब पो परे । होइन, एनटिसीले कहिलेदेखि ट्रान्सफर सुरु गरेछ । मेरो साथीले मलाई थाहा नै नदिएर ब्यालेन्स पठाई दिएछ । तुरुन्तै फोन गर्यो, “थाहा पाइस्, सुरु भएछ नि । अब अघि पठाएको ब्यालेन्स फिर्ता गरिहाल् त ।”
विगतका १४ महिनादेखि बन्द रहेको ब्यालेन्स ट्रान्सफर बल्ल बल्ल सुरु गरिएको रहेछ । त्यो पनि परिक्षणका लागि रे । गत वर्षको असार २३ गतेदेखि टेलिकमले जिएसएम नमस्ते प्रिपेड मोबाइलमा व्यालेन्स ट्रान्सफर सेवा बन्द गरेको थियो । व्यालेन्स ट्रान्सफरको सिस्टममा सुधार गरेर यो सेवा सुरु गरिएको हो रे ।